Barlamaanka Puntland oo ka hadlay Colaada Gobalka Sool (dhegayso) – Radio Daljir
Janaayo 10, 2018 11:46 b 0
Xildhibaan Burhaan Aadan Aw Cabdi oo ka mida Gollaha wakiilada Puntland oo la hadlay Radio Dajir ayaa si kulul uga hadlay weerarkii Maamulka Somaliland uu kusoo qaaday deegaanka tukaraq ee gobolka sool .
Mudane Burhaan ayaa ku eedeeyay maamulka somaliland inay wadaan xad gudub cad ayna doonayaan dad iyo dhul ay Puntland leedahay ‘ waxaana uu wacad ku maray inay Puntland qaadi doonto tilaabada ugu haboon .
Burhaan ayaa caddeeyay in xukuumaddii kala duwanaa ee Puntland soo maray ay ka gaabiyeen arrimaha gobolka sool waxaana uu xusay in markaan Puntland ay u soo jeensatay sidii ay u difaaci lahayd dhulkeeda iyo dadkeeda sida uu hadalka u dhigay .
Haddaba xildhibaanka waxaa waraystay wariye Axmed Sheekeeye oo waydiiyay waxaa uu kaga jawaabayo werreerka Maamulka somaliland ay kusoo qaadeen deegaanka tuka raq sida uu ula muuqdo .
Xildhibaan Horre Siciid Diiriye oo ka hadlay dulaanka Somaliland (dhegayso)